မှော်စွမ်းအားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော ကလေးတစ်ယောက်မှာသာရှိသော လက္ခဏာများ (၆) ခု
Home Uncategorized မှော်စွမ်းအားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော ကလေးတစ်ယောက်မှာသာရှိသော လက္ခဏာ (၆) ခု
ကလေးတစ်ဦးကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ အနစ်နာခံမှု၊ သင့်ရဲ့ အဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုနှင့် သင့်စွမ်းအင်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ပြုစုပျိုးထောင်နေတဲ့ကလေးက ထူးခြားသော လက်ဆောင်တွေနှင့် ထူးချွန်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေပါဝင်လာတဲ့အခါမှာ ပိုရှုပ်ထွေးလာပါလိမ့်မယ်။ ပါရမီရှင်ကလေးတစ်ဦးကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှော်ဆန်သော ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေကိုလည်း သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ ကလေးငယ်မှာ Vivid Dreams တွေရှိပါတယ်
အိပ်မက်ကမ္ဘာဆိုတာ အလွန်ထူးခြားသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစွမ်းထက်ဆုံးနှိုးထလာသူတွေက အိပ်မက်ထဲမှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကို မျှဝေဖို့ အမြဲလိုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းက ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံး မှော်အစွမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးက အဲ့ဒီ့နေရာကနေ စတင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးဟာ ညဘက်မှာ ပြင်းထန်သောအိပ်မက်တွေကနေ မကြာခဏနှိုးထလာလေ့ရှိပါသလား? သင့်ကလေးက ပုံပြင်တွေပြောနေပါသလား? ငယ်ငယ်ကတည်းက ပါရမီပါလာသော ကလေးငယ်ဟာ ပြင်းထန်ပြီးသ ကြောက်စရာကောင်းသော အိပ်မက်တွေကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်(လက်တွေ့ဘဝမှာ ပြင်းထန်သော အနိုင်ကျင့်မှုများ မကြုံတွေ့ဖူးပါက)။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေကို ချရေးပြီး အိပ်မက်တွေကို အာရုံစိုက်ပါ။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အရာတစ်ခုကို တွေ့နိုင်ပါတဘ်။ အထူးနံပါတ်များ (သို့) အရောင်များနှင့် တိရစ္ဆာန်တစ်ခုခုပေါ့။
၂။ ကလေးငယ်က ကျိုးပဲ့နေသော အရာများ (သို့) ဖျားနာနေသော အကောင်လေးတွေအတွက် သူ့ရဲ့ လက်ကို အသုံးပြုပြီး အလိုလိုကုပေးနေတတ်ပါတယ်
သင့်ကလေးက ကျိုးပဲ့နေသော အပင်တွေအပေါ် သူ့လက်ကို အလိုလိုတင်ပြီး ကုသနေသလိုမျိုး လုပ်လေ့ရှိပါသလား? ကုသခြင်းဆိုတာ လူတစ်ဦးရဲ့ စွမ်းအင်အခြေအနေအပေါ် အပြန်အလှန်သက်ရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ကလေးဟာ ဖျားနာနေသောလူတွေနှင့် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ကုသဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် သတိရှိသော ပါရမီကြီးမားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ ကလေးငယ်မှာ စိတ်ကူးယဉ်သူငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်
မြင်ရသည်ဖြစ်စေ၊ မမြင်ရသည်ဖြစ်စေ ဝိညာဉ်တွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဝိညာဉ်တွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေကို ခံယူဖို့ အာရုံခံစားတတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့တစ်ယောက်ဟာ အမှန်တကယ်အလုပ်များနေပါလိမ့်မယ်။ မှော်ဆန်သောကလေးတွေဟာ အဲဒီ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံကြပါတယ်။ သရဲတွေ၊ နတ်သမီးတွေ၊ မှင်စာတွေအပြင် တစ်ခြားအကောင်လေးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေးမှာ စိတ်ကူးယဉ်သူငယ်ချင်းတွေရှိနေပြီဆိုရင် သူတို့ကို အမျိုးအမည်မဖော်ပြတတ်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေလို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
၄။ ကလေးက လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကို မကြိုက်ဘူး
သတိရှိပြီး ပါရမီကြီးမားသော ကလေးတွေက အများအားဖြင့် စာနာမှုအပြည့်ဖြင့် မွေးဖွားလာကြပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာ ဘာလဲ? အဓိကကတော့ တစ်ခြားလူတွေ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက်ဆောင်ကို မပိုင်ဆိုင်ရခင်မှာ တော်တော်ကြမ်းတမ်းသောအချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးက လူများတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်နေပါသလား? ကလေးတွေဟာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း (သို့) ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ခြင်းတွေတောင် ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ကလေးဟာ သဘာဝအတိုင်း စာနာတတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင် မှော်စွမ်းအင်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ ကလေးငယ်က အပင်တွေနဲ့ စကားပြောတယ်
သစ်ပင်တွေ၊ ပန်းပင်တွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက သက်ရှိတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်မတို့အတွက် မမြင်နိုင်/မသိနိုင်သော နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံကြပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ သင့်ဥယျာဉ်က နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ စကားပြောနေပါသလား? သစ်ပင်တွေကို ပွေ့ဖက်တတ်ပြီး စကားပြောလေ့ရှိတယ်ဆိုရင် မှော်စွမ်းအင်တွေရှိသော ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၆။ ကလေးက တိရစ္ဆာန်တွေကို ဆွဲဆောင်တယ်
တိရစ္ဆာန်တွေက လူသားတွေရဲ့ ဩဇာနှင့် စွမ်းအင်ကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့သော တိရစ္ဆာန်တွေက လူသားတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်ခြင်းကို ခံကြရပါတယ်။ သင့်ကလေးနောက်ကို တိရစ္ဆာန်တွေက ချစ်ကြပြီး သူ့နောက်ကို လိုက်လာလေ့ရှိသလား? သင့်ကလေးဟာ ငှက်တွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်သူလား? တိရစ္ဆာန်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို မင်္ဂလာရှိတဲ့ကလေးတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာတော့ မွေးရာပါဝိညာဉ်ရေးရာ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleတာဝန်ကျေတဲ့ အကောင်းဆုံး မိဘဖြစ်နည်း နည်းလမ်း အသွယ်သွယ်
Next articleထက်မြက်တဲ့ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးတွေကို စိတ်ထက်သန်စေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်
ပိုပြီး အပြုသဘောဆောင်သော ပျိုးထောင်မှုအတွက် လမ်းညွှန်မှုများ
လက်ထပ်ပြီးချိန် အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုရဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးနှင့် အခက်ခဲဆုံးနှစ်ကာလများ
ကလေးတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးထဲထိ ကြင်နာမှု ဖြန့်ဝေရန် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း ၆ ခု